Badhaasa Sadarkaa Addunyaatti Dubartoota Jajjabeesuuf Baranaa Kanname
Badhaasii sadarkaa addunyaatti Dubartoota jajjabeesuuf baranaa kannamee dubartoota 21kan ture yoo ta’u kanneen keessaa 7 haleellaa qiyyaafata jala tureen Afgaanistaan keessatti ajjeefaman.
Sirna badhaasa kana kennuu kan ministrii haajaa alaa Yunaaytid isteets keessatti gaggeffamee irratti ministeera haajaa alaa Amerikaa kan ta’an Antonii Bliinken giiftii duree Yunaaytis Isteetes Jiil Baaydin bakka argamanti, waajiirri keenya waggootiidarban 15f dubartoota addunyaa irratti nagaa haqa kabajamuu mirga dhala namaa fi walqixxummaa saalaaf jabinaa fi hoggana addaa agarsiisan badhaasaa ture jedhan.
Dubartoota badhaasa kabajaa ammaa argatan keessa, Mariyaa Kaaleensnikoovaa Belaaruus irraairraati.Ishee fi michoonni ishee bulchiinsa waggootii 26 kan Aleeksaandar Lukashenko irratti rakkoo seena qabeessa hammeessan.Filannoon gaggeeffame eega fashalee booda gootummaan hidhaa isaa isaan mudatee simatan.
Phyoe Ohyoe Aung hoggantuu Burmaa keessatti mul’ataa dhuufte dha.Jaarmayaan ishee kan The wing Institute jedhamu garween dargaggootaa gama gosaa fi amantiin akka yaada wal jijjiiran gochuun,nagaa fi araara jajjabeeessaa jiru.
Badhaasa baranaa kanneen argatan keessaa kan biraa MaximilenneNgo Mbe Kaameeruun irraa yoo taatu, kabajamuu mirga dhala namaa jajjabeesuun akkasumas kanneen hawaasa siviliif sagalee ta’an keessaa tokko.Wal waraansa sivilootaa kan Kaameeruun keessatti Nageenya dhunfaa isheetiif ituu hin sodaatiin murtiin karaa nagaa akka argamu gootee jirti.
Wang Yu Chaayinaa irraa kabajamuu mirga dhala namaaf Abukaatoo falmituu beekamtuu fi qabsaa’ootaaf falmuu isheef carraan hidhamuu ishee mudatee jira.
Julienne Lusenge Ripaablikii Demokraatawaa Kongoo keessatti/ qabsaa’oota dubartootaa kanneen hokkara saala irratti hundee godhachuun gaggeeffamuuf morman hogganaa turte.
Dubartiin badhaasa kana argatan ka biraan Maayerliis Angaritaa Kolombiyaa irraa, Haadha murtii kan ta’an Erikaa Aifan Guatimaalaa irraa, Shohran Ghanarajah Siriilaankaa Irraa, Kanaan Gullu Tarkii irraa, akkasumas Anaa Conteeraas Veniizu’eelaa irraati.
Ministeerri haajaa alaa Yunaaytid Isteetes Antonii Bliinken akka hubachiisanti dubartootaa fi shamarran dhiittaa mirga namoomaaf daran saaxilamoo dha.
Kanaaf jecha imaammata alaa kan Yunaaytid Isteetes keessatti waa’een mirgii wal qixxummaa fi kabajaan dubartootaa fi shamarranii ilaalachii duraa kan kennameef.Yeroo imaammata hariiroo alaa qopheeffannu waa’ee mirgaa fi barbaachisummaa dubartootaa fi shamarranii yaada keenyaa qabna.Kanaaf imaammanni keenya caalaatti qubsaa, caalaatti kan kabajaa qabu akkasumas dhuma irratti jireenya uummataa keessatti jijjiirama lubbuu dheeratu argamsiisa jedha.
Dubartoota barana badhaasii kennameef kan ilaaleenis kan dubbatan Bliinken akkas jedha. “isin warra addunyaa foyyoofte, tasgabii qabduu fi walaba taatee argamsiiftan dha..Yunaaytiid Isteetes immo gama keessan dhaabachuun ishees nu boonsa jeCHU Blinken IBSUUN GULAALAAN HAR'A YAADA ISAA XUMUREE JIRA,